MacOS Sierra ရှိ Siri အခြေခံလမ်းညွှန် - ချိန်ညှိချက်များကိုသက်ဝင်စေခြင်း၊ ခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း | ငါက Mac ကပါ
MacOS ရှိ Siri အခြေခံလမ်းညွှန် - ချိန်ညှိချက်များကိုသက်ဝင်စေခြင်း၊ ခေါ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း
မနေ့ကနေ့လည်ခင်း MacOS Sierra သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Apple ကွန်ပျူတာများနှင့်ကွန်ပျူတာများအားလုံးကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ကနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သကဲ့သို့။ ဒီ update တွင် feature အသစ်များစွာမပါရှိပါဘူး။ ငါကမင်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မပေးပါဘူး၊ Siri, မျှော်လင့်အရှိဆုံးအသစ်အဆန်း နှင့် Sierra ၏အရေးကြီးသော။
အဲဒါကိုဘယ်လိုဖွင့်လို့ရမလဲ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဘယ်အရာပြုလုပ်နိုင်သနည်း၊ မူလအမြန်ဖြတ်လမ်းကဘာလဲ။ ၎င်း၏ရှုထောင့်အချို့ကိုပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သလား? နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင် ကောင်းပြီ Siri က Macs ကိုလာနေတယ်, နှင့် iOS တွင်အသုံးပြုသူများကိုအောင်နိုင်ပြီးနောက်။ ဤသည်သည်အခြေခံကျသောသုံးစွဲသူများအတွက်အမြန်ဆက်သွယ်မှုကိုရှာဖွေရန်အလွန်နက်ရှိုင်းစွာတူးရန်အချိန်ကိုမလိုချင်ပါ။ သို့မဟုတ် desktop system ပေါ်ရှိ virtual assistant ကိုသံသယဖြစ်စေတတ်သောသို့မဟုတ်စိတ်မ ၀ င်စားသူများအတွက်အမြန်လမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။
1 Siri သည် Mac များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်
2 Siri နှင့်သင်နှစ်သက်ရာ Siri ။ သင်ဘာကိုပြုပြင်မလဲ။
Siri သည် Mac များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်
သင်၏ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသစ်ပြောင်းသည်နှင့်သင်၎င်းကိုအတည်ပြုနေစဉ် Siri နဖူးစည်းစာတန်းပေါ်လာသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ virtual assistant ကိုဖွင့်ချင်ပါသလား။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်ဒါကသင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ ၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး၊ ငါဘာဆုံးရှုံးနိုင်လဲ အဘယ်အရာကိုမျှ, ဒါပေမယ့်အစားရဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။ ငါလမ်းဖြင့်ငါကြိုးစား, ငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အရာဖြစ်တယ်။
Launcher ဘေးတွင်ရှိ Dock ရှိ icon ကိုကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်းသတိပြုမိမည်။ ယုတ္တိနည်းအရသင်သည်၎င်း၏အနေအထားကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ နှိပ်ရုံဖြင့် Siri ကိုသုံးပါလိမ့်မည်။ သူသည်သင်၏အကူအညီကိုယူလိမ့်မည်။ မင်းလိုချင်တာကဘာလဲဆရာ။ သုံးခုပဲမှာနိုင်မလား? သင်လိုချင်သလောက်ကိုမေးပါ။ Siri သည်သင်၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ဤနေရာတွင်ရောက်ရှိနေသည်။ အကယ်၍ သင်က၎င်းကိုပိတ်ထားရန်မဆုံးဖြတ်ပါကတောင်းဆိုမှုသုံးခုသို့မဟုတ်သန်းခေါင်ယံအချိန်တွင်စွန့်ခွာသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကိစ္စတွင်သင်ရုံရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည် ချိန်ညှိချက်များ> Siri ။ enable သို့မဟုတ် box ကို check လုပ်ပါ။ မင်းမှာအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အခြား settings တွေအများကြီးရှိတယ်။
Siri ကို dock icon သို့မဟုတ် apps menu မှ optional menu icon (Mac ၏ထိပ်ဘား) မှ (သို့) စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသော shortcut မှ activate လုပ်နိုင်သည်။ ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါသည်။ ပုံသေအားဖြင့် Command နှင့် space bar ကိုတစ်ချိန်တည်းနှိပ်ရမည်။ ထို့ကြောင့် Siri သည်သင်၏ ၀ င်းဒိုးရှိဖန်သားပြင်၏ညာဘက်တွင်ပေါ်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မေးခွန်းသို့မဟုတ်တောင်းဆိုမှုကိုနားထောင်လိမ့်မည်။ ၎င်း၏အသုံးဝင်မှုသည် iOS နှင့်ဆင်တူသည်။ တတိယပါတီအက်ပလီကေးရှင်းများကိုတဖြည်းဖြည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးလျှင်၎င်းကိုမြင်နိုင်သည်။
Siri နှင့်သင်နှစ်သက်ရာ Siri ။ သင်ဘာကိုပြုပြင်မလဲ။
ငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ virtual assistant က optional ဖြစ်တယ်။ သင်၎င်းကိုသက်ဝင်စေလိုလျှင်မပါလျှင်။ ပြီးရင် app icon ကို dock မှာတွေ့လား၊ Menu မှာလားနှစ်ခုလုံးကိုရွေးလို့ရပါတယ်။ ထိုအခါမည်သည့်သော့ချက် command နှင့် shortcut ကို mouse သို့မဟုတ် trackpad မသုံးပဲ activate လုပ်လိုသနည်း။ တူညီတဲ့ Settings အပိုင်းကနေ အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အထီးအသံကိုသင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ၏သင်တန်းဘာသာစကားနှင့်အခြားရှုထောင့်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဟာ Siri မှာအတူတူပါပဲဒါပေမယ့်လုံးဝအသစ်သောပတ်ဝန်းကျင်မှာပါ။
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှာဖွေသောအရာများအားဓာတ်ပုံများပြသရန်သင့်အားတောင်းဆိုပါ။ မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပို့ပါသို့မဟုတ် FaceTime ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ ဘောလုံးသို့မဟုတ်အထွေထွေယဉ်ကျေးမှု၏ရလဒ်။ ရာသီဥတု - Siri၊ ဒီနေ့မိုးရွာနေသလား? သင်သိ, ပုံမှန်အတိုင်း။
စိတ်ရင်းမှန်နဲ့, virtual assistant သည် Mac ပေါ်တွင်များစွာအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ။ ဖြစ်ရပ်များ၊ သတိပေးချက်များနှင့်ထိုအလုပ်များ မှလွဲ၍ iPad သို့မဟုတ် iPhone ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်မပြုလုပ်ပါ။ ဒါပေမယ့် Siri ကမိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေထက်မိုဒီကိုပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးအသုံး ၀ င်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့်သင်သတိထားရမယ်၊ သူဘယ်လိုပြုမူတယ်ဆိုတာကြည့်ရမယ်။ ဒါဟာတကယ်တော့အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ အနည်းဆုံးတော့မိုက်ကရိုဆော့ဖ်တွင်လက်ထောက်တစ်ယောက်ရှိခြင်းကိုဝါကြွားမည်မဟုတ်ပါ။ အက်ပဲလ်ကမူမလုပ်နိုင်ပါ။ နှစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မကြာမီထွက်လာတော့မည်။
မင်း Mac ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးပြီလား Siri ကိုစမ်းကြည့်ပြီးပြီလား virtual assistant နှင့်သင့်အတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » MacOS ရှိ Siri အခြေခံလမ်းညွှန် - ချိန်ညှိချက်များကိုသက်ဝင်စေခြင်း၊ ခေါ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း
macOS ဆာဗာကိုရွေးချယ်စရာအသစ်များဖြင့် Sierra သို့မွမ်းမံသည်
MacOS Sierra ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ iWork ကိုလည်း update လုပ်သည်